J: Marawaxad ceeryaamo ah oo cadaadiska sare leh oo leh buufin fiican iyo biyaha dabaysha oo xooggan waxay isticmaashaa xoogga centrifugal si ay u abuurto dhibco ultra-fiican oo hoos yimaada ficilka saxanka wareega iyo qalabka buufinta ceeryaamo, sidaas darteed aagga dusha sare ee uumiga ayaa si weyn u kordhay; socodka hawada ee uu kufsado taageeraha awooda badan ayaa aad u kordhiya...
Mabda'a marawaxada buufinta qaboojinta centrifugal: socodka biyaha iyada oo loo marayo aaladda firdhinta xawaaraha sare ee wareegga biyaha waxay soo saartaa qaybo biyo ah oo leh xoog centrifugal weyn. Qaybaha biyuhu waxay ku duulaan aaladda atomization waxayna jebiyaan qaybo badan oo ceeryaamo ah oo leh dhexroor kaliya 5-10 ...
Sidee buu taageere ceeryaamo centrifugal u soo saaraa ceeryaamo
Marwaxada ceeryaamo centrifugal ah waxa ay ka kooban tahay dhalada kaydinta, bracket, matoor iyo marawaxad; Dhalada biyaha lagu kaydiyo waxaa lagu soo shubay madaxa buufinta, madaxa buufinta waxaa lala xiriirinayaa gudaha dhalada biyaha iyadoo la marinayo tuubo buufis ah, madaxa buufinta waxaa la siinayaa madax buufis ah iyo gacan...
Aynu soo bandhigno nooca dallada kuleyliyaha gaaska dareeraha ah
Xilliga jiilaalka qabow, waa fikradda qof walba inuu buulkiisa ka dhigo mid diiran oo firfircoon. Qalabka kululaynta ee taxanaha ah ayaa soo baxay wakhtiga saxda ah, laakiin sidoo kale waxaa jira khataro badbaado, sida loo isticmaalo si badbaado leh waa dhibaato weyn. Aynu soo bandhigno nooca dallada kuleyliyaha gaaska dareeraha ah. Astaamaha Gaaska...